गेष्ट हाउसमा अश्लील भिडियो बनाएर बार्गेनिङ! « Deshko News
गेष्ट हाउसमा अश्लील भिडियो बनाएर बार्गेनिङ!
युवकले रकम १५ दिनमा तिर्ने सर्त राखेपछि होटलमा तिर्नुपर्ने १५ हजारमात्रै तिरेर उनीहरू बाहिरिएको प्रहरीले बताएको छ। वृत्तका डिएसपी बुढाथोकीले युवकको जाहेरीअनुसार हाल ती युवती, एलिक्स र राजलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध आपराधिक लाभ कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी बुढाथोकीले जानकारी दिए। अन्नपुर्ण पोष्टबाट